Haddii aad go'aansatay in ay kala soo bixi Linux iyo u isticmaalaan madal hawlgal, waxaa laga yaabaa inaad heshay in mararka qaarkood waxay noqon kartaa adag tahay inay helaan software si ay u isticmaalaan waxa on. Waxa jira tiro ka mid ah barnaamijyada ay u beddesho kartaa computer Linux galay mashiin multimedia awood badan. Bal aan eegno tobankii barnaamijyada DVD ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Linux.
VLC waa shaki la'aan ah ciyaaryahan isha furan ugu caansan warbaahinta ee kombiyuutarada Windows. Waxa kale oo laga heli karaa mashiinada Linux. Ma aha oo kaliya waxa ay ciyaari karaan ku dhawaad ​​qaab video file maqal ah iyo, laakiin waxa ay u fiican tahay ciyaaro DVDs iyo hoorto internet video. Waxaa ka ciyaari kara wax kasta oo ku dhowaad file ama video oo aan haysan in marka hore kala soo bixi codec ah. Waxaa gebi ahaanba bilaash ah oo had iyo jeer waxa uu ahaa, oo lagu daray waa lacag la'aan bloatware (barnaamijyada guraa in aad u badan tahay in aan kala soo bixi lahaa wax kale). Interface ayaa nadiif ah waxaa mararka qaarkood loo yaqaan caajis by isticmaala, laakiin waxa uu sidoo kale arkay sida fudud barashada iyo isticmaalka by kuwo kale oo badan.
Totem waxaa loo dhisay in ay ku shuban wareejisaa desktop Gnome Ubuntu. Waxaa u furan software isha ku salaysan GStreamer in uu leeyahay wax badan oo ka mid ah qaababka. Waxaad daawan kartaa filimada shaashad buuxda oo samayn saftay screen iyo sidoo kale dhiso playlists. Play DVDs iyo VCDs dhex ciyaaryahankaan, iyo haddii aad soo bixi Firefox, waxaa jira Mozilla surin-tago in aynu aad u aragto internetka movie ee browser. Marka aad ku shuban filim, waxaa ugu rarataan culaysyo subtitles si toos ah. Barbaraha video A kuu ogolaanaysaa inaad qabsato duwan, dhalaalka, iyo saturation ee videos halka aad iyaga u ciyaaro. Waxaa xitaa xamili karaan 5.1 hareereeya audio dhawaaqa.
Ciyaaryahanka fiican u raaco koob bun ah, ciyaaryahankaan warbaahinta si buuxda u saftay xamili karo files video, CD-yada iyo DVD maqal ah oo ku saabsan deegaanka k desktop-ka, ama KDE, iyadoo la isticmaalayo xine sidii ay dib-dhamaadka. Waxaa u shaqayn karo GStreamer sidoo. Waxaad arki doontaa wax bedeley aad caan ku DVDs iyo waxaad samayn kartaa playlists sidoo kale. Kaffeine sidoo kale xamili karaan geeyo files nool. Haddii aad qabtid qalab baahinta video digital, waxaad isticmaali kartaa Kaffeine la.
Xine waa barnaamij freeware la interface aad u quruxsan. Waa barnaamij GPL u haysta in xamili karaan VCDs, DVD-yada, iyo CD-yada. Plus haddii aad leedahay kale video files, Xine sida fiican u ciyaari kara qaabab ugu badan, oo ay ku jiraan WMA, AVI, iyo files MOV. Users wac images loo maqli karo ee "siman". Waxayna u shaqaysaa iyadoo aan ahayn oo keliya Linux, laakiin dhufto ee kale, sidoo kale, ay ka mid yihiin Mac OSX. Maktabadaha qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in la raran yihiin in ay ka faa'iidaystaan ​​buuxa barnaamijka, laakiin inta badan waxa uu diyaar u yahay inuu tago mar uu soo bixi. Baakadaha Developer ayaa looga baahan yahay maktabadaha.
Tani version of Player Real waa la jaan qaada Linux. Versions Later ay aadeen daruurtii oo camal fiican ee mashiinka Windows ah, laakiin version tani weli waa la heli karo download oo weli diyaar u yahay inuu ciyaaro aad videos on your mashiinka Linux. DVD-yada ka sokow, waxaa ka soo baxay waxaa ka ciyaari kara kasta video file maqal ah oo. Download videos aad aragto kala duwan ee goobaha loogu talagalay loo maqli karo ka dib, iyo in la abuuro playlists kuu gaar ah ee maktabadda. Waxaad ka heli feature ku daray in aan awoodo in xaalkaa videos si markaas ku shuban gal lambarka mid ka mid ah ciyaartoyda la qaadi karo. Waxa kale oo aad sii qulquli karaan audio dhex Player Real.
Video ciyaaryahan MPlayer xamili kartaa qaabab file video ugu badan, oo ay ku jiraan wmv, AVI, iyo MOV, oo la shaqeeya tiro badan oo ka mid ah wadayaasha wax soo saarka. Waxa kale oo ay u ciyaaro kala duwan saxanno, oo ay ku jiraan video CD, DVD-yada, cajalladaha iyo SVCD. Interface waa mid xiiso leh, oo awood u leh biirtay laba qoraal oo wada haysta laba subtitles kala duwan shaashadda waqti isku mid ah. Waxa kale oo aad ka arki kartaa daa xiran. Interface waxaa aad u macquul ka dhigay, la bedeley software caadiga ah ee guud ahaan hogaanka iyo set nadiif ah oo gacanta ku hoose. Users Global yeelan doonaa dhibaatooyin lahayn, maadaama ay jiraan muraayadaha in badan oo ka mid ah dalalka iyo luqado badan waxaa laga heli karaa in subtitles ah.
Kani waa barnaamij il furan dhisay Linux, mararka qaarkood loo yaqaan Balto. Helix hayaa wax badan oo ka mid ah qaababka ay ku code. Soo diyaariyay Networks Real, waxa ay awood u la isticmaalo kala duwan oo ka mid ah nidaamyada hawlgalka, xataa qalabka la qaadi karo sida telefoonada. Sida barnaamijyo badan oo adduunka Linux ah, dadka isticmaala waxay awoodi karaan in ay soo jeedin ay ku dhiirigelinayaan in uu hagaajiyo barnaamijka. Helix waa awoodaa inuu ciyaaro videos heerka waxoogaa ugu fiican marka ay hoorto mahad feature ah in si toos ah ogaadaa bandwidth ah. Buuxi dhawaaqa hareereeya u audio weyn, Helix ciyaari karaa noocyo kala duwan oo warbaahinta.
Barnaamijkan freeware xamili karaan shaqooyin kala duwan in barnaamijyo kale oo badan in ay yihiin oo kaliya ciyaartoyda aysan heli karin. Ma aha oo kaliya ciyaara qaabab kala duwan file video, laakiin waxa ay xamili karaan HD sidoo. Waxaa kale oo u dhaqmo sida barnaamijka download YouTube ah oo leh awood HD download. Waxaad ku shuban kartaa maktabadda Lugood aad hadda galay Miro iyo ciyaaro audio iyo video jiraan, iyada oo aan si dhab ah faylasha bedelanaysa Miro, si ay wali loo aqoonsan doonaa by Lugood. Waxaad u bedeli karaan faylasha inay ku shuban aad u huriyaan dab iyo telefoonka Android ama kiniin. Waxaa soo saaray macaash aan dawliga ahayn, Miro waa il freeware oo u furan labadaba, si users go'aan ku leeyihiin sida ay u shaqayso.
Haddii aad raadinayso ciyaaryahan computer DVD shaqeeya wax badan oo kale oo lacag la'aan ah-taagan nidaamka madadaalada model sameeya, Ogle waa qaado. Waxaa qoreysa bedeley DVD, awood zoom, gefo, wax soo saarka audio multi-channel, iyo Bookmarks. Ogle ma, si kastaba ha ahaatee, ka ciyaari kara DVD in la iman sirta ah si looga hortago dooxeen. Haddii aadan rabin inaad ka interface garaafyada user (gui), waxaad kala soo bixi kartaa version ah waxa aan. Waa barnaamij lacag la'aan ruqsad ka heeysan liisanka dadweynaha GNU, oo ka duwan barnaamijyada kale ee aannu u eegay, waa uun u ciyaaro DVD.
10. ciyaaryahan SM
Ugu dambayn, waxaan raadin doonaa ciyaaryahan video in xajisto oo dhan ee kuu gaar ah oo ku saabsan videos. Waxaa ka ciyaari kara qaabab kala duwan ee files audio iyo videos, iyo sidoo kale DVD. Haddii aad jeceshahay in aad isku dubaridi ama subtitles kuu gaar ah, barnaamijkan sii dayn doonaa inaad sameeyo. Barbaraha ayaa kaa caawinaysaa in aad ka taagay nidaamka loo maqli karo dhawaaqa u gaar ah. SM Player waa freeware shaqeeya labada Linux iyo Windows, si wax kasta oo ay qol aad ku rakibi on, waxay ka shaqeyn doonaan. Waxa kale oo aan u baahnayn ku rakibidda codecs si gooni gooni ah.
Waxaan rajaynaynaa in tobankan horyaal ku siin qaar ka mid ah fikrado ku saabsan oo video ciyaaryahan aad rabto in aad ku shuban rogtid oo aad mashiinka Linux si ay idiinku beddelin xarunta ah ee nidaamka warbaahinta computer. Isku day mid ka mid ah ama dhammaan oo ka mid ah - ay tahay lacag la'aan ah sidaa ma inaad wax noqon haddii aad maskaxdaada beddesho oo aad rabto inaad tijaabiso mid ka mid ah oo kala duwan.
> Resource > DVD > Top Ten Best Linux DVD Players